Ụbọchị My Pet » Olee otú Bịakwute A Nwanyi Online - Site A nwaanyị Ele
Tupu m lụrụ m nwetara m mma òkè nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, gụnyere ọtụtụ e-Gburu si nwere ịchọ ịlụ gị ịbịa online. M nnọọ otú ga-esi na-ahụ ezi, ndị ọjọọ na ndị jọrọ njọ. M sooro ọtụtụ n'ime m girlfriends banyere ha ahụmahụ nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Isiokwu a na-achikota ihe na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na a mbụ e-mail na a nwaanyị na ihe na-eme ka ọbara anyị ọsọ oyi na aka anyị kụrụ ihichapụ tupu ọgwụgwụ nke paragraf!
Ị na-enyi na enyi - Ọ na-ada doro anya na ị ga-anya otú ọtụtụ ndị ikom ichefu nke a mgbe ha izipu ha oghere e-mail. Ọ bụ dị ka ọ bụ ezie na ezi uche dị na oke akụkụ nke ụbụrụ-ewe ihe karịrị na ha chọrọ ikike inwe azụmahịa (na-ekwu okwu na ekwentị / mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ma ọ bụ ọbụna mmekọahụ). O di nwute na anyị ndị inyom na-adịghị arụ ọrụ otú ahụ. Anyị na-arụnye anyị ụkwụ na-ahụ otú obi dị anyị na mbụ ị. Anyị ga-achọ ka romanced na-enweta na enyi na enyi mkparịta ụka na uche gị. Chee echiche nke ya dị ka 'anya ọkụ anyị' ma ọ bụrụ na-amasị gị. Always na-emeghe a enyi na enyi, mkparịta ụka e-mail (adịghị oke ogologo) na ị ga-ọtụtụ ndị ọzọ na-eme.
Ị na-edebe ya ìhè na-akpali - E a nguzozi n'agbata akpali / ntị grabbing na gbanyụọ mgbidi / anya-etinye. Amaara m na ọ nwere ike ime ka nsogbu mgbe ị na-agbalị ide a ọma oghere e-mail. The ndụmọdụ kasị mma m pụrụ inye bụ na-onwe gị. Gụọ ihe ndị na ngalaba n'okpuru na-esi zere ịbụ ndị na-agwụ ike na ebe a bụ di na nwunye nke Atụmatụ n'ihi na ị na-enyere gị aka na-ewetara onwe gị dị ka na-akpali ka ya maara na ị dị oké ọnụ ahịa na-aza. Gụọ ya profaịlụ ọma ma kwuo na ihe ị na-ahụ na e nwere. Kọọ ya azụ ihe i nwere ma ọ bụrụ na o kwere omume ike a njikọ. Ịja mma arụ ọrụ nke ọma bụrụhaala na ha na-adịghị overdone na-ezi. Otu obere otito dị mma maka a mbụ e-mail. I nwekwara ike ikwu okwu banyere ihe na-eme gị ụbọchị, ihe na-egosi na a bit nke onye ị bụ. Ọ bụrụ na ị na-akpa ọchị Ihọd na-eche na-eji obere ọchị, dị nnọọ adịghị overdo ya. Akọrọ ọchị pụrụ n'ụzọ dị mfe a ga-misconstrued site na e-mail. Women jikọọ site mmetụta uche ma na-akọrọ ahụmahụ, ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịmepụta njikọ ya na ya na ị bụ ọkara ụzọ e.
Ndi na-ya mkpụmkpụ - Ọ bụ ezie na anyị chọrọ ka ị na-enyi na enyi na fun na anyị achọghị edemede. A dum na peeji nke ide ga-abụ na eziga anyị na-ehi ụra ma ọ bụrụ na anyị na-agụ ya mgbe niile, Otú ọ dị riveting ọ pụrụ ịbụ. Ke mma anyị nwere ike ewepụrụ abụba agụ ya ma na anyị ga-ekpe ndị ọzọ ikpe na-eche ma ọ bụrụ na ị bụ onwe ekwe mgbe anyị na-emeghe e-mail ịhụ a dum na peeji nke ide! Gị e-mail kwesịrị ịbụ ịgụ na mfe ka anyị na-agụ, nke pụtara mkpụmkpụ ma na-anya grabbing. Gaa maka àgwà n'elu ukwu. A ole na ole na impactful paragraf na a otito bụ a uzommeputa ihe ịga nke ọma.
Atụla na-agwụ ike - OK m na-aghọta na o nwere ike ịbụ ihe siri ike mara ihe na-ekwu, otú ahụ ka m ga-enye gị otu di na nwunye nke ngwa hints. Agwụ Ike na-ede a ndepụta nke stof banyere onwe gị dị ka gị àgwà, ma ọ bụ na-ezipụ ozi nke dị jụọ ya ma ọ bụ n'ihi na-ekwu okwu na-enweghị ozi ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ọ na-adịghị a obi na-adị gị na àgwà gị e-mail ọ ga-amaghị ma ọ chọrọ ịgwa gị. Ma n'ihi ya, ọ ga-dị nnọọ emekpala iji zaghachi. Ị chọrọ ya ka ịdịrị dee azụ. Adịghị nnọọ ideghari profaịlụ gị, ọ ga na-agụ na ọ bụrụ na ọ bụ ndị nwere mmasị.
Atụla cheesy - Ọtụtụ ndị ga-overcompensate na-agbalị siri oke ike. Nke a nwere ike anya dị ka n'elu-ojiji nke Ekele na / ma ọ bụ ọchị, na mgbe na-abịa-apụ na kasị mma dị ka cheesy, na na kasị njọ ka sikwara ike njite. Dee ya dị ka ezie na ị na-ekwu okwu na-a nwanyi enyi, nke ga-egbochi gị ndidi kwa anụmanụ na-ada n'ime uche set nke na-agbalị ike ime ya. Jiri ọchị na Ekele ma ufat. Dị nnọọ ka nnu na-eme ka nri mma, ọ bụ naanị ihe ọma mgbe eji ufat, otu ụkpụrụ na-emetụta ebe a.
Unu depụta niile gị chọrọ - Mgbe ụfọdụ ndị ikom ga-depụta ihe niile ha na-achọ na otu nwaanyị na mbụ e-mail. Ma mgbe ụfọdụ, ha ga-depụta niile àgwà na ha achọghị (ọbụna njọ - atụ egwu!) Nke a na-dị ka isiike na ga-a nwaanyị oyi. Ọ bụ eleghi anya na-aza ma ọ bụrụ na ị na-eme nke a.
Unu slag anya ọzọ gị na ụmụ zutere online - N'ụzọ dị mwute nke a kwa bụ nkịtị m online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ụbọchị, na mgbe ọ tụgharịrị m oyi. Ọ bụ nnọọ iru ala n'ihi na a nwaanyị na-ege ntị a nwoke slagging anya nwaanyị ọzọ o dere. Na na azụ nke uche anyị anyị na-eche ma ọ bụrụ na anyị ga-ekpe otu eke dị ka ya na ọ na-eme anyị na-eche na tenderhooks eche ọ bụrụ na ị na-eme dị ka ịkatọ nke anyị dị ka ị bụ nke ebe a. Zere nke a dị ka ọrịa.
Anaghị ekwu okwu mmekọahụ ke akpa e-mail! - M na-aghọta na mgbe ị na-ahụ a nwaanyị mara mma ị na-eche ahụ, na e nwere ihe dị njọ na nke a. Otú ọ dị anyị ndị inyom dị nnọọ mwute banyere ịbụ bịakwutere kpere maka mmekọahụ. N'ihi na ọtụtụ ndị inyom na-eji ihe online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị, nke a abụghị a bụ isi mere anyị na-ahụ, anyị na-achọ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na / ma ọ bụ a ndụ ibe. M maara otu bụ eziokwu maka ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ikom bụ ndị na-na mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị kwa, na mwute ikwu na e nwekwara ọtụtụ ndị ikom na-bụ ndị dị nnọọ n'ebe ahụ n'ihi na ha chọrọ ka tọrọ. Anyị radars na-sensitively na-ekiri ka chọpụta ndị. Anyị ga-enyocha ha nnọọ ngwa ngwa, N'ihi ya, zere ịbụ kpọrọ dị ka otu n'ime 'ndị ikom' na-. Zere ihe ọ bụla banyere mmekọahụ na gị na mbụ e-Gburu. M maara na e nwere ndụmọdụ si n'ebe si nwoke 'bulie artists' nke na-akọ banyere ewu escalation na mmekọahụ erughị ala, na nke a niile bụ nke ọma na ezi, Otú ọ dị m na uche ọ na-adịghị arụ ọrụ maka online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Dịghị ihe ọzọ ọ na-arụ ọrụ mgbe mere a ụfọdụ ụzọ. Fun flirting bụ magburu onwe, ma ị gaghị eme ka ọ kwa na ogbo ọ bụrụ na ị na-abịa gafee kwa mmekọahụ gị na mbụ nkwukọrịta. Iji anyị ndị inyom ọ bụ crass. Ọ na-adị a shortcut ma ayi kwere na anyị bụ otu nke pụta ị na-agbalị a na-na. Cheta, ọ chọrọ pụrụ iche. Na-arụ ọrụ a na njikọ mbụ, mgbe ahụ, ụfọdụ nwayọọ flirting.
Karịsịa ihe nile ga-esi gị n'uche ka nri - Ọ nwere ike ịbụ eluigwe, ma na-echeta na ọ bụ nanị otu nwaanyị nke ọtụtụ. Ọ bụrụ na ị na-enwe nsogbu na-ejikọta ya na ndinyom online na-anata gị ozi, anya na uche gị ka mbụ. Ị na-enwe mmetụta sikwara ike njite? Ị na-etinye gị niile na-enwe olileanya n'ime otu e-mail mgbe ị na-ezite ya? Ọ bụrụ otú nke a ga-abịa gafee na e-mail na ga-etinye ndị inyom anya. Ọrụ na gị onwe gị obi ike na uche ka nke mere na ị maara na e nwere ọtụtụ nhọrọ maka ị. Gị ụbọchị ga-abịa na ya pụta nke ọ bụla 1 e-mail dị mkpa abụghị. Nke a ga-unu ike izipu fun, ekere òkè na ìhè hearted ozi na a ga-ezi omume.